Iweghachite ahịa ụlọ nkwari akụ: Lee Germany, Spain na Gris
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Iweghachite ahịa ụlọ nkwari akụ: Lee Germany, Spain na Gris
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ na -agbasa na Greece • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Resorts • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọnụ ahịa ụlọ oriri na nkwari akụ ka na-agbanwe agbanwe n'oge ọgba aghara COVID-19, ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na-atụ anya mgbake zuru oke nke ahịa ụlọ oriri na nkwari akụ mba ụwa ka ọ na-erule 2024.
Ebe ọtụtụ ndị na -arụ ọrụ na nkwari akụ nwere usoro mgbazinye arụgharịrị azụ, a na -egbochi nnukwu mfu n'ọtụtụ ahịa.
Nnyocha nke Tranio mere mere ka a ghọtakwuo mmepe ngalaba a.
Na August 2021, Tranio jikọtara ọnụ na International Hotel Investment Forum (IHIF) ime nyocha ọnụ na mmetụta ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ nwerela na ngalaba ile ọbịa kemgbe Machị 2020, yana itinye ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya n'ahịa na-aga n'ihu.
Nnyocha ahụ gosipụtara ihe karịrị ndị ọkachamara ụlọ ọrụ 160 si n'ofe Europe ajụjụ ndị ezubere ịmepụta nghọta zuru oke banyere agụụ, mmetụta na ihe ndị ọzọ na -akwado itinye ego ala na ụlọ kemgbe mmalite ọrịa ahụ.
Imirikiti ndị sonyere na nyocha ahụ (59%) bụ ezigbo ụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ile ọbịa, 16% bụ ndị na -arụ ọrụ na họtel, 13% kọwara onwe ha dị ka ndị na -etinye ego. Otu 'ndị ọzọ' (12%) nwere ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ndị ndụmọdụ itinye ego, ndị prọfesọ mahadum na ndị nta akụkọ.
Nnyocha ahụ kpughere na ọtụtụ ndị ọkachamara na -atụ anya na ụlọ ọrụ ile ọbịa ga -agbake n'ime afọ atọ na -abịanụ, n'agbanyeghị na ọnọdụ mba ụfọdụ ga -adabere na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ndị zara ajụjụ ahụ chere na ahịa German, Spanish na Greek ga -adị mma karịa ndị ọzọ n'ihe banyere mgbake ngwa ngwa. Na mgbakwunye, nuances dị na azịza ndị na -aza ajụjụ na -eme ka a ghọtakwuo na ngwakọta agwakọta echiche dị ugbu a n'ahịa.
na United States 21 n'ime 25 ahịa ụlọ oriri na nkwari akụ na -amaliteghachi.
52% kwenyere na ahịa ụlọ nkwari akụ ahụ ga -agbake site na 2024
Ọtụtụ ndị zara ajụjụ a kwupụtara nkwenye na ahịa ile ọbịa ga-agbake na ọkwa nsogbu tupu afọ atọ eruo. Ihe karịrị ọkara-52%-nke ndị sonyere na-ebu amụma ịlaghachi na nkịtị ka ọ na-erule 2024, ebe 32% ọzọ nwere nchekwube na ihe ga-alaghachi na ọkwa ọrịa tupu 2023.
Ihe na -erughị 7% na -atụ anya mgbake zuru oke site na 2022. Otu onye na -aza ajụjụ a, Alexander Schneider si Nikki Beach Hotels and Resorts, na -atụ anya na ahịa oge ntụrụndụ ga -enwe otu n'ime afọ kachasị ike na 2022. Mana ndị ọzọ na -akpachapụ anya karịa na amụma ha. Otu onye zaghachiri nke na -egosighi aha ha kpebiri na ụlọ oriri na nkwari akụ na mpaghara njem nlegharị anya ga -agbake naanị ma ọ bụrụ na ọnụ ahịa abawanye na ụdị ọrụ na -agbanwe.
Karịsịa, ndị na -arụ ọrụ na họtel yiri ka ha nwere nchekwube: 44% kewara n'etiti atụmanya nke mgbake zuru oke na 2023 ma ọ bụ 2024, ebe 6% họọrọ 2022 dị ka afọ mgbe ihe ga -alaghachi na nkịtị. N'aka nke ọzọ, ndị na -achụ ego na -akpachapụ anya. Ọtụtụ ndị ọchụnta ego (87%) na -atụ anya mgbake n'ime afọ atọ na -esote, ọ nweghịkwa onye kwenyere na ọ nwere ike ime na 2022.
N'etiti ndị ọkachamara n'ihe gbasara ụlọ na ndị ọbịa, 51% na -atụ anya na ahịa ga -agbake na 2024, ebe 35% kwenyere na ọ ga -eme ntakịrị oge, na 2023. Banyere 5% na -atụ anya na ahịa ga -alaghachi na nkịtị na 2022, ebe 5% ọzọ chere ya ga -eme n'etiti 2026 na 2030.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na -etinye ego anaghị atụ anya mgbake ngwa ngwa, ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere nchekwube na mpaghara ụlọ oriri na nkwari akụ n'afọ ndị na -abịanụ - omume nke ngosipụta nke ile ọbịa gosipụtara nke ọma. akụkọ maka nkeji iri na abụọ nke 2021. Ngụkọta nke 85% nke ndị na -etinye ego, dị ka akụkọ ahụ si kwuo, gosipụtara echiche itinye ego dị mma maka ụlọ ọrụ nkwari akụ, ebe 13% nọpụrụ iche na naanị 2% enweghị nchekwube. Ọhụụ ile ọbịa anọwo na -enyocha mmetụta onye na -azụ na onye na -ere ihe na mpaghara ụlọ nkwari akụ kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro. Ụlọ oriri na ọ holdụ holdụ na -ejide elu ndepụta ahụ maka nkeji nke atọ n'ahịrị dị ka ohere itinye ego kacha mma n'ime ọnwa iri na abụọ sochirinụ, ụlọ na ebe ezumike ga -esochi ya.
Ndị ọkachamara kwenyere na Germany na Spain ga -ahụ mgbake kachasị na azụmaahịa ụlọ nkwari akụ
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ (35%) nke ndị zara ajụjụ kwenyere na ahịa German ga -alaghachi ngwa ngwa karịa ndị ọzọ. Ihe dị ka 30% kwenyere na ahịa Spanish ga -agbake ngwa ngwa.
N'ime ndị na -arụ ọrụ na họtel, 31% họọrọ Germany, na 25% onye ọ bụla rụtụrụ aka na Gris, Italy, na Spain. Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ, 27% nke ndị ọrịre ụlọ ma ọ bụ ndị ọkachamara na -ele ọbịa na -eche na Gris ga -adị ngwa ngwa iji gbakee mana ọtụtụ ka na -eme ntuli aka maka Germany na Spain.
Ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị na-etinye ego-69%-kwupụtara ntụkwasị obi kachasị n'ahịa UK, ebe ndị ọzọ zoro aka na Germany na Gris. Dị ka akụkọ ọhụrụ STR si kwuo, ngalaba ile ọbịa UK na -egosi ọnụego mgbake kachasị na Europe, nke ụlọ oriri na nkwari akụ ezumike na -ebugharị.
Offọdụ n'ime ndị zara ajụjụ ahụ, ndị họọrọ “ndị ọzọ,” ndị a kpọtụrụ aha na nkwupụta United States, Asia n'ozuzu, yana Turkey na China karịsịa. Kirk Pankey, Onye isi ala na onye isi ụlọ ọrụ na -ele ọbịa nke Lagundi, kwupụtara na mba ndị nwere ọgwụ mgbochi ga -enwe mgbake ahịa ngwa ngwa.
Ọnụ ego ụlọ nkwari akụ ka na -agbanwe agbanwe
Ọnụ ego ịzụrụ ihe na họtel agbanwebeghị ma ọ bụ daa 5% ma ọ bụ ihe na -erughị, dị ka ọnụ ọgụgụ buru ibu (78.6%) nke ndị zara anyị si kwuo.
N'ihe gbasara mgbanwe ọnụahịa, echiche ndị otu nyochara dị iche. Ndị na -arụ ọrụ n'ụlọ oriri na ọ compụrisụ nwere ndị na -enweghị nchekwube, naanị 44% na -ekwu na ọnụ ahịa agbanwebeghị ma ọ bụ daa site na 5%. Ka ọ dị ugbu a, 38% nke ndị ọrụ kwenyere na ọnụ ahịa adaala karịa 15% ma ọ bụ ọbụlagodi 20%. N'otu oge ahụ, 85% nke ndị ọrịre ụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ile ọbịa na 81% nke ndị na -etinye ego nwere echiche na ọnụ ahịa agbanwebeghị ma ọ bụ daa ihe dị ka 5%.
Enwetara data ọnụọgụ nke enwetara na ntuli aka ahụ site n'aka onye njikwa Tranio George Kachmazov, onye gosipụtara na ọ gaghị ekwe omume ugbu a ịzụta ezigbo ụlọ nkwari akụ na ezigbo ọnọdụ na ọnụ ala dị ala, n'agbanyeghị nsogbu na -aga n'ihu n'ahịa.
"Enwere ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na -emetụta ọnụ ahịa: Liquidity na ahịa na -apụ na chaatị ndị a n'ụzọ sara mbara, n'ihi amụma ego nke steeti. Ụlọ akụ, ya bụ ndị nwe mgbazinye ego echekwara na họtel, na -eguzosi ike n'ihe nye ndị nwe ụlọ. Ha na -ezere ijide ihe nbinye ego, ebe ha na -enyekwa mbinye ego mbinye ego. Na mkpokọta, iji zụta ihe ụlọ nkwari akụ taa na mbelata ego siri ike (nke nwere mmepụta nke 6% ma ọ bụ karịa), mmadụ kwesịrị ileba anya na ọrụ dị na ọnọdụ adịghị mma, ọ bụghị nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ nwee mkpa nrụzigharị. Ọzọkwa, enwere ike ịzụta akụrụngwa nwere oke oke nke ego MICE ugbu a na mbelata karịa 10-20% karịa ọnụahịa ire ere. Maka nnukwu akụrụngwa dị na ọnọdụ dị mma, ego kacha dị ala mmadụ nwere ike nweta ugbu a bụ 5-7%, dịka atụmatụ anyị siri dị, "Kachmazov kwuru.
Ndị ọzọ zara ajụjụ gosiri na enwere nnukwu ohere ịre ọnụ ahịa na họtel. “Ịhapụ ndị nwere ara site na nkwado gọọmentị niile ga -emepụta ọtụtụ ndozi na ihe mgbu ga -esite na ngalaba ahụ. Azụmaahịa azụmahịa ka na -akwụsị akwụsị, "otu n'ime ndị na -etinye ego kwuru.
Ọtụtụ ndị na -arụ ọrụ na họtel jụrụ ajụjụ kwuru na ha amalitela mkparịta ụka maka usoro mgbazinye ha
Nnyocha a na -egosikwa otu ndị ọrụ si meghachi omume na ọrịa ọjọọ. Ọtụtụ n'ime ndị sonyere na nyocha ahụ (70%) gosiri na ndị na -arụ ọrụ arụgharịala okwu mgbazinye. Ndị ọrụ onwe ha họọrọ nhọrọ a n'ihe dịka 59% nke ikpe, dịka nzaghachi anyị siri dị. Maka ndị na -etinye ego, ọnụ ọgụgụ ahụ bụ 63% yana maka ndị ọkachamara ala na ụlọ, ọ bụ 74%.
Nsonaazụ maka azịza 'akwụghị ụgwọ ụlọ' dị iche site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe abụọ: ndị na -arụ ọrụ n'onwe ha họọrọ azịza a na naanị 13% nke ikpe, ebe ndị na -etinye ego na ndị ọkachamara ụlọ na -enye azịza a na 26% na 25% nke ikpe, n'otu n'otu. .
Ngwọta ndị ama ama maka ndị na -arụ ọrụ n'oge ọrịa a gbanwekwara na nkwekọrịta ngwakọ na nkwekọrịta njikwa na ndị nwe ya, yana 34% na 9% nke ndị zara azịza niile na -enye azịza ndị a. N'otu oge ahụ, ndị ọrụ onwe ha họọrọ nhọrọ ndị a naanị na 18% (gbanwee na nkwekọrịta ngwakọ) na 5% (nkwekọrịta njikwa) nke ikpe.
Ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ gbanwere na mgbazinye etiti na ogologo oge n'oge ọrịa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara, ma ọ bụ 41%, nke ndị zaghachirinụ kwenyere na ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ bịara nabata mgbazinye etiti na ogologo oge n'oge ọrịa. Na mgbakwunye, 32% nke ndị ọkachamara kwenyere na a tụgharịrị ọtụtụ ụlọ nkwari akụ ka ọ bụrụ oghere ọrụ, yana 17%, na ha mepere kichin mmụọ ma ọ bụ ụlọ ahịa gbara ọchịchịrị.
Otu n'ime ndị sonyere nyocha ahụ kwuru, "Nnukwu mgbanwe ga-esi na ọrịa na-efe efe bụ ịrị elu nke ebe obibi ogologo oge yana nnukwu ụdọ na-atụgharị onyinye ha iji nabata ndị ọbịa ogologo oge."
Naanị 10.2% tụlere na a tụgharịala ọtụtụ ụlọ ezumike nka ka ọ bụrụ ụlọ ezumike nka, n'agbanyeghị na -arịwanye elu n'oge na -adịbeghị anya maka ụlọ ndị okenye. Dabere na ndị ọkachamara Tranio, ịtụgharị ụlọ nkwari akụ ka ọ bụrụ ụlọ ezumike nká anaghị ekwe omume n'ihi ọdịiche teknụzụ dị iche iche ma ọ bụ ọnọdụ adịghị mma.
Offọdụ ndị ọkachamara na -ahụ maka ezigbo ụlọ ma ọ bụ ndị ọbịa n'etiti ndị zara anyị rụtụrụ aka na ụlọ nkwari akụ gbanwere n'ụlọ ebe enweghị ebe obibi, nye ndị ọrụ ahụike ebe obibi ma ọ bụ mepee ebe nnwale COVID. Joan E. Capella, Director M&A maka Iberolat Consulting & Investment kwuru, "Ọtụtụ ụlọ oriri ka emechiri emechi, naanị ole na ole nyere ọrụ ọhaneze."
Ọdịnaya ịgba ọgwụ mgbochi ka mma ga -eme ka mgbake ahịa ahịa ụlọ oriri na nkwari dị
Mgbe a jụrụ ha ihe ha chere ga-eme ka ọ gbakee n'ọrịa na-efe efe, ndị zara zara rụtụrụ aka na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Agbanyeghị na enwere azịza dị iche iche maka ajụjụ a, 71% nke ndị zara ajụjụ rụrụ ụka na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ga -abụ ihe kacha baa uru. Ntughari nke njem nlegharị anya mba ụwa na akụ na ụba ụwa bụ azịza ndị ọzọ kacha ewu ewu, na -aza 58% na 46% n'otu n'otu. Na mgbakwunye, 23% kwenyere na ahịa ụlọ oriri na nkwari akụ ga -enweta nkwalite site na ịmaliteghachi ihe ngosi na ihe omume azụmahịa. Otu n'ime ndị ọkachamara kwuru na njem nlegharị anya azụmaahịa ga -agbake naanị “ozugbo ebuliri ihe mgbochi njem yana ọ bụrụ na ọnụọgụ ndị ọgwụ mgbochi gafere 80%.”
Otu n'ime ndị zara azịza kwuru teknụzụ na -enweghị mmetụ na AI dịka otu ngwaọrụ nwere ike ịgbanwe 'njem nlegharị anya na ile ọbịa maka ngwongwo'.
Ụfọdụ ndị sonyere gosiri na nkwado gọọmentị, ọkachasị na Ireland na Slovenia, enyerela ngalaba ile ọbịa aka ịlanarị oge ihe isi ike. Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ na -ahụ maka ụlọ na Slovenia Investmond kwuru na na Slovenia ụmụ amaala natara akwụkwọ ikike steeti nke na -enye ohere ka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ obodo jupụta 100%. Ha kwuru, "Ahịa ụlọ na Slovenia hụrụ ka ọnụ ahịa jiri 40% rịa elu site na Jenụwarị ruo Ọgọst 2021."
"N'echiche m, na mgbakwunye na mgbake akụ na ụba n'ozuzu ya, ịbawanye njem nlegharị anya mba na mba dị iche iche ga -enye aka na mgbake ngwa ngwa nke ahịa ụlọ nkwari akụ site na 2022," Detlef Lauterbach si DELA kwuru.
Anyị na Tranio nwekwara nchekwube maka mgbake azụmaahịa ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ ma na -achọ ohere ịzụta obere ụlọ nkwari akụ ndị chọrọ nrụzigharị na mbelata ego wee kwadebe ha maka oge mgbake ahịa - iji rụzigharị, kwalite ma rụọ ọrụ digitalize.
Isi Iyi: https://tranio.com/
Ngwá Agha Kachasị Mma Megide COVID-19 Delta Ndịiche
Oge Ọhụrụ na Nchebe Njem Nleta Latin America
Lithuania na Kazakhstan ga -ebupute ndị njem ozugbo ...
Uru Ahụike Ọhụrụ dị ịtụnanya mgbe ị na -anụ ụtọ French ...
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica na -aga Portugal maka…
A na -akpọ nwanne ọhụrụ Emirates nwere ahụike na South Africa ...
Mperi ụgbọ elu 10 nkịtị na -efu gị ego
Na -a Moreụkwu mmanya. Nyere aka itolite akụ na ụba ụwa